समाजवादीका सांसद वेपत्ता, प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो !::अर्थपूर्ण : अर्थ र सम्पूर्ण समाचार
समाजवादीका सांसद वेपत्ता, प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपहरणकारीको गम्भीर आरोप लागेको छ । समाजवादी पार्टीले आफ्ना केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द यादवको अपहरण गरिएको आरोप लगाएको छ । समाजवादी पार्टीले अपहरणको मुख्य योजनाकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भएको जिकिर समेत गरेको छ ।
जनकपुरमा रहेका सांसद यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश भन्दै प्रहरीहरुले पक्राउ गरेर काठमाडौंतिर ल्याएको समाजवादी पार्टीले जनाएको छ । समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि बुधबार साँझ ५ बजे यादवलाई प्रहरीले जबरजस्ती अपहरण गरेको दावी समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले घटनाको विरोध जनाएका छन् । सांसद यादवले बुधबार दिउँसो पार्टी विभाजनमा सहभागि हुन सत्तापक्षका मान्छेहरुले धम्की दिएको गुनासो बाबुराम र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसंग टेलिफोनमा गरेका थिए ।